Baarlamanka Soomaaliya oo su’aalo weydiiyey wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Baarlamanka Soomaaliya oo su’aalo weydiiyey wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda
4th May 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa maanta hortegay wasiirka dekadaha iyo gaadiidka badda Soomaaliya, Yuusuf Macallin Amiin (Baadiyow).
Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay Muqdisho ayaa su’aalo dhowr ah weydiyey wasiir Yuusuf Macallin Amiin.
Su’aallaha ugu badan ee ay xildhibaanadu weydiiyeen wasiirka ayaa ku saabsanaa maamulka dekedda caalamiga ah ee magaalada Muqdisho, shaqaalaha dekedda ka shaqeeya, gaadiidka xamuulka ka daabula dekedda, dhaqangelinta heshiiska dekedda ee ay xukuumaddu la gashay shirkad Turki laga leeyahay iyo arrimo kale.
Wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda, Yusuuf Macalin Amiin (Baadiyoow) oo xildhibaannada uga jawaabay su’aallaha ay weeydiiyeen ayaa sheegay in dekedda Muqdisho ay ka shaqeeyaan shaqaalle gaaraya 7,200 (Todobo kun iyo labo boqol) kuwaasi oo 6,600 (Lix kun lix boqol oo kun) ka mid ah ay yihiin muruqmaal ama xoogsato.
Wasiirka ayaa dhanka kale baarlamaanka ka hor cadeeyey inaysan shirkadda Turkiga ah haba yaraatee ka shaqeyn dekedda oo aan lagu wareejin maamulkeeda.
Guddoomiye ku-xigeenka Koowaad ee Golaha Shacabka, Jeeylaani Nuur Iikar oo isagu shir guddoominayey kulanka Baarlamaanka ee maanta ayaa gebegebadii tilmaamay iney soo gebageboobeen su’aallihii ay xildhibaannada baarlamaanku weeydiinayeen wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda, waxaana uu wasiirka uga mahad celiyey sida uu ugasoo jawaabay u yeerista baarlamaanka.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa horay su’aalo dhowr maalmood qaatay u weydiiyey wasiirada amniga qaranka iyo arrimaha gudaha iyo federaalka C/kariim Xuseen Guuleed iyo C/llaahi Goodax Barre, halka Raysulwasaare C/weli Sheekh uu shalay baarlamaanka u jeediyey khudbad dheer oo ku saabasan siyaasadda dowladda.
Wasiir ka tirsan maamulka Somaliland oo gaaray Buuhoodle xilli uu joogo Cali Khaliif Galeyr
Wasaaradda Tamarta iyo Biyaha Soomaaliya: Haloo gurmado dadka biyo la’aantu heysato